Mahasoa ve ny ambadika mainty hamerenana ny fiainana bateria amin'ny Android? | Androidsis
Moa ve ny ambadika mainty manampy ny famonjena ny ain'ny bateria amin'ny Android?
Ireo mpampiasa Android dia manana fiheverana lehibe amin'ny bateria. Noho izany, matetika, dia tadiavina na ampiasaina fika hiarovana bateria amin'ny telefaona, amin'ny karazana isan-karazany toe-javatra samihafa. Araka ny efa fantatsika, ny efijery no singa mandany bateria betsaka indrindra amin'ny smartphone, amin'ny ankapobeny. Fetsy maro no mifantoka amin'ny efijery sy ny fomba hampihenana ny fanjifana herinaratra an'ny efijery.
Io rehefa miditra izy ny toro-hevitra hampiasa wallpaper mainty. Manolo-kevitra an'izany ny manam-pahaizana sasany satria nilaza izy ireo fa fomba iray hamonjeny ny fiainana bateria amin'ny Android. Tena misy dikany ve io torohevitra io? Holazainay aminao bebe kokoa momba io adihevitra io etsy ambany.
Ny tahotra ny ho lany bateria dia mitarika antsika hatrany hanandrana karazana tetika rehetra amin'ny Android. Na dia amin'ity tranga ity aza dia maro no manontany tena ny amin'ny fahombiazan'ny Ampiasao ny rindrina mainty amin'ny findainao, ho toy ny fomba hampihenana ny fanjifana lamba. Na dia izany aza dia zavatra mety ho marina izany, tsy mandeha amin'ny tranga rehetra.
Ny lakile amin'ity lafiny ity dia ny karazana efijery anananao amin'ny findainao. Angamba ny ankamaroanareo dia efa naheno ireo lohahevitra ireo talohan'izay. Saingy, ny teknolojia ampiasain'ny tontonana dia misy akony lehibe amin'ny fanjifana herinaratra. Noho izany, mety misy ny mpampiasa manana efijery izay mihena ny fanjifana azy. Satria, temotra mainty mety ho fanampiana raha ny amin'ny fitehirizana bateria amin'ny Android.
Taratasy mainty: fitaka hamonjy bateria?
Amin'ity tranga ity, zavatra azo atao amin'ny efijery AMOLED izy io. Amin'izao fotoana izao dia maro ny finday avo lenta manana ny sarin'ity karazana ity, indrindra ao anatin'ny Android avo lenta dia mahita maodely mampiasa an'io haitao io ao aminy isika. Noho izany, zava-dehibe izany fantaro ny maha samy hafa azy amin'ny karazana efijery hafa, rehefa mividy smartphone.
Ny fampisehoana AMOLED dia mahomby kokoa amin'ny angovo noho ny efijery LCD IPS. Ity misy fanazavana, izay tena tsotra. Hatramin'ny efijery AMOLED dia tsy manana tamberina. Midika izany fa ny pixel dia ilay mamoaka ny hazavany manokana. Ka rehefa mainty ny efijery finday Android dia maty ny pixel resahina dia tsy mandeha izy. Midika izany fa tsy misy angovo lany amin'izany fotoana izany.
Noho izany, amin'ity tranga manokana ity, rehefa manana smartphone Android misy tontonana AMOLED ianao, eny azo atao ny mamonjy bateria. Be dia be ny mpampiasa mampiasa ny sary maizina, amin'ny mainty, mba hihena ny fihinanana. Misy wallpaper maro no misy manokana ho an'ireo mpampiasa manana smartphone miaraka amin'ity karazana efijery ity. Eto ihany koa dia misy vola bebe kokoa ho azy ireo.
Saingy midika izany fa tsy misy dikany ny fampiasana rindrambaiko mainty raha manana smartphone Android miaraka amin'ny efijery IPS LCD ianao. Hatramin'ity tranga ity dia manana ny heviny izay noresahinay ireo lamba. Noho izany, na dia mainty aza ny écran, na satria tsy miasa ny telefaona na satria manana sary mainty tanteraka ianao, tsy zavatra hanampy anao hitsitsy angovo izany. Izay azonao atao fampiasana ny karazana vola rehetra amin'ny telefaona, feno loko.
Raha manana smartphone Android misy efijery IPS LCD ianao, ny fomba hampihenana ny fanjifana heriny dia manitsy ny famirapiratany. Io ihany no fomba tena mahomby mba hahatratrarana fa ny fihinanana ny efijery dia somary ambany kokoa. Noho izany dia zavatra tokony hampiasainao amin'ny toe-javatra toy izany, raha tianao handany bateria kely kokoa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » bateria » Moa ve ny ambadika mainty manampy ny famonjena ny ain'ny bateria amin'ny Android?
Ahoana ny fanovana ny anarana Android Bluetooth
Donald Trump mba hanao sonia ny didim-panjakana izay mandrara ny mpandraharaha tsy hampiasa fitaovana tambajotra sinoa